उच्च शिक्षाको लागि न्युजिल्यान्ड सम्भावना र चुनौती - Setoparewa Setoparewa
असाेज २० गते २०७४
उच्च शिक्षाको लागि न्युजिल्यान्ड सम्भावना र चुनौती
- बिजय अधीकरी , करियर काउन्सिलर
पछिल्लो समयमा न्युजिल्यान्ड उच्च शिक्षाको लागि विभिन्न प्रश्नहरु आउने गरेको छ । त्यसै बिषयमा पोखराको चर्चित इन्सर्च इन्टरनेशनल का सन्चालक बिजय अधिकारी को बुझाइमा न्युजिल्यान्ड बारे जानकारी यस्तो छ ।
सन 1953 मा न्युजिल्यान्ड नागरिक सर एड्मन हिलारि सर्बोच्च शिखर सगरमाथा मा पहिलो पाइला राखे सङ्गै नेपाल र न्युजिल्यान्ड बिचको सम्बन्ध सुमधुर मानिन्छ । New Zealand सन 2014 बाट नेपाली विद्यार्थी हरुको बिशेश गन्तव्य स्थान बन्न गएको पाइन्छ । कस्तो Profile भएको विद्यार्थी NZ पढ्न जान योग्य मानिन्छ अथवा NZ student visa पाउन के के प्रक्रिया पूरा गर्नु जरुरी छ? सर्बप्रथम त NZQA (New Zealand Qualification Authority) को अनुसार ३ वोटा फिल्ड मा international students पढ्न जाने ब्यबस्था छ।
NZ मा जम्मा ८ वोटा युनिभर्सिटी मात्र छन र सबैमा higher education को लागि उच्च financial तथा academic background भएका विद्यार्थी हरु जाने trend छ। नेपाल बाट NZ को University मा पढ्न जाने को संख्या निकै कम छ।
सम्पुर्ण बिद्यार्थी हरुलाइ बिदेश पढ्न जानू अघि के के कुरा मा जानकारि हुन जरुरी छ र के के कुरा बारे बुझ्नु पर्छ भन्ने बारे यो लेख लेखिएको अधिकारी बताउछन
2. ITP (Institute of Technology and Polytechnic):
सामान्यतया भन्नुपर्दा न्युजिल्यान्ड मा भएका सरकारी कलेज लाई आइ टि पि भनेर बुझ्न सकिन्छ ।
अहिले NZQA को website अनुसार 16 वोटा ITP college हरु NZ मा छन । जसमा tuition fees 16000 NZD देखि 24000 NZD सम्म प्रतिबर्स हुन्छ । IELTS (so called) 5.5/5.0 भएर academic 45% कटेका बिद्यार्थी हरु ले येस्ता कलेज मा पढ्न को लागि offer letter पाउने प्राबधान छ । (conditions apply*) सामान्य private college मा भन्दा यिनी कलेज म पढ्नको लागि भिजा पाउन सजिलो हुने र NZ मा पुगेपछि part time job को लागि पनि निकै सहज हुने गर्दछ।
सम्पुर्ण NZ को सरकारि कलेज हरुको नाम निम्नअनुसार छन:
Ara Institute of Canterbury, Eastern Institute of Technology
NorthTec, The Open Polytechnic of New Zealand
Otago Polytechnic, Southern Institute of Technology
Tai Poutini Polytechnic, UNITEC Institute of Technology
UCOL- Universal College of Learning, Toi Ohamai (Waiariki+BOPP) Institute of Technology
Western Institute of Technology at Taranaki and Whitireia New Zealand.
3. PTE (Private Training Establishment ):
अर्थात न्युजिल्यान्ड मा भएका निजि क्याम्पस हरु लाई पि टि यी भनेर बुझ्न सकिन्छ । कम academic % भएका र IELTS 5.5/5.0 अनि Education gap भएतापनी न्युजिल्यान्ड मै उच्छ शिक्षा को सपना भएका विद्यार्थी हरुको रोजाइ मा PTE College हरु पर्द्छन । करिब 400 को हाराहारी मा PTE College हरु न्युजिल्यान्ड मा स्थापना छन । ITP को तुलना मा PTE मा Tuition fees अलि सस्तो हुन्छ । र जुनसुकै month मा पनि intake हुन्छन । भर्ना प्रक्रिया अलि झन्झटरहित हुन्छ । Tuition fees सामन्यतया 15,000 NZD to 22,000 NZD / Per year हुने गर्दछ । प्रायः Business, Health, IT, Hospitality, Tourism, Cookery etc. लगायतका courses पढ्न को लाई PTE रोजाइ मा पर्दछन।Aspire2, AIS, NZMA, RBC, EDENZ etc. केइ चर्चित PTE का नाम हुन ।
New Zealand को लागि Financial Requirements..
न्युजिल्यान्ड पढ्न जानको लागि निम्नअनुसार बैंक ब्यालेन्स अथवा लोन चाहिन्छ (Nabil or NSBI Bank accept) यदि NZQA Level 5&6 apply गरेको भए total tuition fees plus दुई बर्ष को Living Expenses देखाउनु पर्दछ । (15000 NZD per year living expenses)
अर्थात 43-55 lakh Bank Balance or Education loan हुन जान्छ । यदि NZQA Level7or 8 (1-1.5 academic year programme ) apply गरेमा total tuition fees plus living गरि देखाउन पर्दछ । लगभग 27-40 laakh पर्न जान्छ । यदि तपाइँलाई अन्य कुनै Information तथा Counseling चाहिएमा Education New Zealand Trained Agent Counselor or ICEF Certified Counselor सङ्ग परामर्श पनि लिन सक्नु हुनेछ ।
अधिकारी जर्मन स्थित आइ सि इ फ (ITAC 0972 ) र Canada course graduate (CCG 00487) साथै एजुकेसन न्युजिल्यान्ड बाट सर्टिफिकेट प्राप्त करियर काउन्सिलर हुन